Zawgyi Daily – Page2– News & Entertainment Media
ဧပြီလလျှပ်စစ်မီတာခများ များပြားနေမှု ကမ်ပိန်းပြုလုပ်၍ မြို့နယ် ၄ ခုမှ လက်မှတ်များကောက်ခံ ကန့်ကွက်မည်
ဧပြီလ လျှပ်စစ်မီတာခနှုန်းထားများပြားနေသည့်အပေါ် ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် လူမှုကွန်ရက် ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ် ၄ ခုတွင် လက်မှတ်များကောက်ခံ၍ အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်ထံသို့ ကန့်ကွက်ကြောင်း တင်ပြသွားမည်ဟု အဓ္ဓမဝါဒီဆန့်ကျင်ရေးကော်မတီမှ ဦးမြတ်ကျော်ကပြောဆိုသည်။ “ ဧပြီလအတွက်ပေးဆောင်ရတဲ့မီတာခတွေက အရင်လတွေထက်ပေးဆောင်ရတာများနေတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ၁၅ဝ ယူနစ်လျှော့တဲ့ကိစ္စ သူက အနောက်ကလျှော့တာလား။ အရှေ့က လျှော့တာလားဆိုတဲ့ကိစ္စ အနောက်ကလျှော့ရင် သုံးထားတဲ့ ယူနစ်တွေထဲက ၁၅ဝ ယူနစ်ကိုနုတ်ပြီးတော့မှ ပိုက်ဆံတွက် အရှေ့ကလျှော့တာကျတော့ မီတာယူနစ် ၅ဝမကျော်ရင် ဘယ်လောက်တို့ ၁ဝဝမကျော်ရင် ဘယ်လောက်တို့ အဲလိုတွေ သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ ၂ဝဝကျော်သွားရင် ၁၂၅ကျပ် အဲလိုတွေသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ သူတို့က မီတာ ၁၅ဝလျော့တာကို ဘယ်လိုမလှိမ့်တပတ် လုပ်လည်းဆိုတော့ ယူနစ် ၃ဝဝ သုံးထားရင် ၁၅ဝကိုနုတ် ကျန်တာတွက်အဲလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဟိုအရှေ့က ၃၅ယူနစ်က […]
နှိပ်စက်ခံရတဲ့အပြင် အစာအငတ်ထားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ခွေးလေးရဲ့ ကူကယ်ရာမဲ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်
ဘယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုမဆို မွေးမြူထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဂရုစိုက်မှုတွေ ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ပေးသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့တွေက သခင်တွေကိုသာမှီခိုအားထားနေရပြီး လူတွေနည်းတူ အသက်ရှင်ရုန်းကန်နေရလို့ပါပဲ။ ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြမဲ့ ခွေးလေးကိုတော့ တိရစ္ဆာန်တွေကို ကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေတဲ့ A Fortress of Fur ဆိုတဲ့ Facebook group တစ်ခုကနေ ဝေမျှဖော်ပြထားခဲ့တာပါ။ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာတော့ ဆိုးဝါးလွန်းလှတဲ့ခွေးလေးရဲ့ အဖြစ်ကိုမြင်တော့ရမှာဖြစ်ပြီး ခွေးလေးကိုအသက်သေသည်အထိ အစာအငတ်ထားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး ခွေးလေးကို မိသားစုတစ်ခုက ပြန်လည်မွေးစားခဲ့တာပါ။ ခွေးလေးကိုတော့ သူ့ရဲ့မူလပိုင်ရှင်က အစာအငတ်ထားပြီး ၊ သံကြိုးတွေနဲ့ ချည်နှောင်ထားခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ခွေးလေးဟာ အာဟာရပျက်ပြီး အရိုးပေါ်အရေတင်ဖြစ်နေခဲ့ကာ လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တဲ့အထိပါပဲ။ ထို့ကြောင့် ကယ်ဆယ်ပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့က ခွေးလေးကိုနီးစပ်ရာဆေးခန်းသို့ အလျင်အမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် အစာ နှင့် ရေများတိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ် ။ ခွေးလေးကို အချိန်အတော်ကြာပြုစုခဲ့ကြပေမဲ့လည်း ခွေလေးဟာ လူတွေကိုကြောက်နေတုန်းဆိုတာ […]
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အဖြစ် ရောက်ရှိတော့မည့် မုန်တိုင်းငယ်နှင့် ယနေ့ မိုးလေဝသ အခြေအနေ . . .
ဆိုင် ကလုန်းမု န်တိုင်းအဖြစ် ရောက် ရှိတော့မည့် မုန် တိုင်းငယ်နှင့် ယနေ့ မိုးလေဝသ အခြေအနေ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်း တို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး၊ (၁၅.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မုန်တိုင်းငယ် (Depression) အဆင့်သို့လည်းကောင်း၊ (၁၆.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Cyclonic Storm) အဆင့်သို့လည်းကောင်း ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် မုန်တိုင်းငယ် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက်၊ ကနဦးတွင် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားကာ၊ (၁၇.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ကွေ့နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင် တိမ်အသင့်အတင့်မှ တိမ်ထူထပ်နေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တွင် တိမ်အနည်းငယ် ဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။ ယနေ့မွန်းတည့်ချိန်အထိ ခန့်မှန်းချက်ကတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ထိန်းချုပ်နိုင်သဖြင့် LOCKDOWN များပယ်ဖျက် ပြီး လုပ်ငန်းများပြန်စတင် ခွင့်ပြုတော့မည်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ထိန်းချုပ်နိုင်သဖြင့် LOCKDOWN များပယ်ဖျက် ပြီး လုပ်ငန်းများပြန်စတင် ခွင့်ပြုတော့မည်ဟုသိရသည်။ လက်ရှိအနေအထား အရ ပိုးတွေ့လူနာ အခြေအနေက ထိန်းချုပ်နိုင်နေဆဲ ဖြစ်တာကြောင့် မေလ ၁၅ ရက်ထိ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အမိန့်ကို နောက်ထပ် သက်တမ်းတိုးဖွယ် မရှိတော့ပါ။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အညီ ၁၆ ရက်နေ့ကစပီး လုပ်ငန်းအများစုကို ပြန်လည်စတင် ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ နယ်စပ်ဒေသတွေ Visa ကိစ္စတွေကတော့ မသိသေးပါဘူး။ ဆက်ပိတ်ထားဖို့ များပါတယ်။ဒါ့အပြင် Semi Lockdown ချထား တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ထဲက မြို့နယ် ၁၀ ခု အနက် ၄ မြို့နယ် (မင်္ဂလာဒုံ၊ လှိုင်သာယာ၊ရွှေပြည်သာနဲ့ ဗိုလ်တထောင်) တွေကို Lock down အမိန့်ကို အနည်းငယ် […]
ကိုဗစ်ကာလတွင် နေ့စဉ်လူ(၇၀၀)နီးပါးခန့်အား မနက်စာ ညစာများ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်လှူဒါန်းသူ
Stay Home ကာလအတွင်းမှာ နေ့စဉ်လူ(၇၀၀)နီးပါး ခန့်အား မနက်စာ ညစာ များ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်၍ကျွေးမွေးလှူဒါန်းခဲ့တဲ့အလှူရှင် ကိုအောင်ကြီးအကြောင်း လေးစားလွန်းလို့ ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်… လေးစားပါတယ် ကိုအောင်ကြီး စတေးဟုမ်းကာလ အတွင်းမှာ နေ့စဉ်လူ(၇၀၀)နီးပါး ခန့်အား မနက်စာ ညစာ များကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်၍ ကျွေးမွေးလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရွှေပြည်သာမြို့မှ ကို‌အောင်ကြီး ကိုအောင်ကြီးသည် ရြွေပည်သာမြို့နယ်အမှတ်(၁၁) ရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်သူ သာမန် ပြည်သူတစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါသည်။ ပရဟိတစိတ်ဓါတ်ထက်သန်ပြီး ရပ်ကွက် အတွင်း သာရေး/နာရေး ကိစ္စရပ်များတွင်လည်း တက်ကြွစွာကူညီဆောင်ရွက်တတ်သူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်၍ရပ်ကွက် တွင်းနေသူများ၏ လေးစားချစ်ခင်ခြင်းကိုခံရသူတစ်ဦး လည်းဖြစ်ပါသည် ။ ယခုကာလ ကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်နိုင်ရေး အတွက်နိုင်ငံတော်မှထုတ်ပြန်ခဲ့သော…. ပြည်သူများအား မိမိတို့၏ နေအိမ်အတွင်း၌သာ နေထိုင်ကြရန် ( Stay at Home […]
အမေရိကန် မှာ လူသား နဲ့ စတင်စမ်းသပ် ခဲ့ တဲ့ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ပထ မ အဆင့် အောင်မြင်
Zawgyi May 13, 20200comment
ပီး ခဲ့တဲ့ မတ်လအလယ်လောက်မှာ ကာကွယ်ဆေးကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Seattle မှာ ပထမဆုံးစမ်းသပ်ခဲ့တာ မှတ်မိမှာပေါ့။ ဘယ်တုန်းကဘယ်လိုစမ်းသပ်တာလဲ⁉️ အဲ့ဒီ RNA vaccine ကာကွယ်ဆေးကို အမေရိကန်အစိုးရ National Institute of Allergy and Infectious Disease နဲ့ Moderna တို့ ပေါင်းစမ်းသပ်တာပါ။ လူ ၄၅ ယောက်ကို mRNA-1273 ပေးပြီး March 19 အထိလူစုစမ်းသပ်ပါတယ်။ April မှာ Alanta နဲ့ Georgia မှာ ထပ်စမ်းပါတယ်။ အခြေအနေကဘယ်လိုလဲ⁉️ ပထမအဆင့် Phase I မှာ အခြေအနေကောင်းတဲ့အတွက် FDA က fast-track authorization ပေးလိုက်တယ်။ သဘောက Phase II […]
COVID-19 ကပ်ဘေးကာလမှာ မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်မှာ ဘုရားထီးတော်ပင့်ဖို့ လူစုလူဝေး ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးဆောင်သူ ဦးဇော်မင်းကို ကျိုက်မရောမြို့နယ် တရားရုံးက မေ ၁၂ ရက်မှာ ထောင်ဒဏ် ၉ လ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ ကျိုက်မရောမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲမှူးမင်းအောင်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ ကျိုက်မရောမြို့နယ် ကြာအင်းချောင်း ကျေးရွာနေ ဦးဇော်မင်း ဦးဆောင်ပြီး မတ် ၃၀ ရက်က ဘုရားထီးတော်ပင့်ဖို့ ကား ၁၈ စီး၊ အသံချဲ့စက် ကား ၂ စီး၊ လူဦးရေ ၁၅၀ လောက်နဲ့ ကော့ကျိုက်-ဓမ္မဿ ကားလမ်းအတိုင်း လှည့်လည်ကာ ထီးတော်ပင့်ဆောင်ခဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လှည့်လည်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျိုက်မရောမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ် ၃၀ […]
ကိုဗစ်ထက် ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ သီပေါက ကလေး (၃) ဦး
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မိုင်းလာအုပ်စု၊ အထက်ပန်တီးရွာတွင် တစ်ပတ်အတွင်း ကလေး(၃)ဦးသေဆုံးသည့် သတင်းရရှိသဖြင့် အဆိုပါရွာသို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ ဆုံဆို့နာဟု ယူဆရသဖြင့် ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့် အခြားကလေး ၅ ယောက် အား သီပေါဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကုသနေကြောင်း သီပေါမြို့နယ် ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ နန္ဒဝင်းက ပြောပါတယ်။ “ကျေးလက်ကျန်းမာရေးကိုယ်စားလှယ် (ဘော်လံတီယာ)ထံက ကလေးတွေဆုံးတဲ့ သတင်းကြားကြားချင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ နယ်စည်းမခြားပရဟိတအဖွဲ့တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး လမ်းမကောင်းတဲ့ မိုင် ၇ဝေ ကျာ် ကို သွားရောက်စစ်ဆေးတော့ ဆုံဆို့နာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီး ကျန်ဖျားနာနေတဲ့ ကလေးတွေ ကိုဆေးရုံကိုခေါ်လာ အာခေါင်တို့ဖတ်ယူပြီး ပြည်နယ်ကတဆင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ဖို့ ပို့ထားပါပြီ။ လမ်းမကောင်းတော့ မိုးမရွာဘဲရာသီ ဥတုကောင်းရင်း ရွာမှာကျန်နေတဲ့ ကလေးတွေ အမြန်ဆေးထိုးပေးနိုင်ရေးနဲ့ ဒီဆေးရုံမှာ အခုကုသနေတဲ့ကလေးတွေ မန္တလေးကို ပို့ရ/မရ […]
တရုတ်နိုင်ငံဝမ်တိန်မြို့ကနေ မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာသူ ၆ ဦး Quarantine မဝင်ပဲထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်
Zawgyi May 12, 20200comment
တရုတ်နိုင်ငံ ဝမ်တိန်မြို့ ကနေ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာသူ ၆ ဦး Quarantine မဝင်ပဲ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ဝမ်တိန်မြို့မှ အိမ်မဲမြို့သို့ ပြန်လာမည့် နေရပ်ပြန် (၆) ဦးအား ရန်ကုန် ဘူတာကြီး၌ သွားရောက် ခေါ်ဆောင်ခဲ့ ရာတွင် ရထား ဆိုက်ရောက် ချိန်မှာ ပါလာခြင်း မရှိပဲ တိမ်းရှောင် သွားရာ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး မယ်ဇလီ စစ်ဆေးရေး ဂိတ်၌ သူတို့ (၆) ဦးအား ပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့ပါသည် ၊မြို့နယ် ကိုဗစ် ၁၉ ကော်မတီမှ ခေါ်ယူ လာပြီး အိမ်မဲမြို့ အ.ထ.က (၁) ကျောင်း Facility Quarantine Camp […]
ဝေဘာဂီဆေးရုံကို ဒေးဗစ်လားမှ သိန်း၁၀၀ လှူဒါန်းတယ်ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဒေးဗစ်လားနှင့်ရင်းနှီးခင်မင်သူ
လူလိမ်ဒေးဗစ်နွားမင်းလိမ်ထားတာမင်းရှင်းပေတော့ဝေဘာဂီဆေးရုံကို ဒေးဗစ်လားမှ သိန်း၁၀၀ လှူဒါန်းတယ်ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဒေးဗစ်လားနှင့်ရင်းနှီးခင်မင်သူ စိုင်းဖီးလစ်ဆိုသူက ဝေဘာဂီဆေးရုံကို သိန်း ၁၀၀ လှူဒါန်းလိုက်တာပါ။ စိုင်းဖိလစ် ကိုယ်တိုင်မလာနိုင်လို့ ဒေးဗစ်လားကို KBZ BANK ကနေ ငွေသိန်း၁၀၀ လွှဲပေးပြီးဝေဘာဂီဆေးရုံကိုလှူခိုင်းလိုက်တာပါ။ စိုင်းဖီးလစ်ဆိုသူဟာ မန်းရတနာပုံဟော်တယ်နဲ့ မန်းရတနာပုံလေကြောင်းလိုင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေးဗစ်လား ဝေဘာဂီဆေးရုံကို အဲ့ဒီ့ငွေကိုပေးလှူတဲ့အခါ ဆေးရုံအုပ်ကြီးကို သူလှူတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပေးလှူသွားတဲ့အပေါ် ဦးစိုင်းဖီးလစ် ပြန်လည်ကြားသိတဲ့အခါ ဘာမှအပြစ်မပြောပေမယ့် စိတ်မကောင်းစရာသတင်းပါပဲလို့ပဲပြောပါတယ်။ ဦးစိုင်းဖီးလစ်ဟာဖောင်ကြီးဆေးရုံအတွက် PPE ဝတ်စုံတွေကိုလည်းလှူဒါန်းထားပါသေးတယ်။ထို့အပြင်ဒေးဗစ်လားမြန်မာပြည်စရောက်ကတည်းကနေစရာအိမ်မရှိလို့သူပိုင်တောင်ဥက္ကလာနေအိမ်မှာတည်းခိုနေထိုင်စေခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။